कसरी आयु-प्रूफ जीवन जिउने - Victor Mochere
उमेर एक प्रक्रिया हो, एक पटक घटना होइन। तपाईं एक दिन उठ्नु हुन्न र तपाईं बुढो भएको महसुस गर्नुहुन्न। हृदय रोग देखि बुढ्यौली छाला सम्म जेष्ठहरूलाई असर गर्ने एउटै पोषण समस्याहरू बीच वर्षहरूमा सुरु हुन्छ। बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित अधिकांश रोग र डिसफंक्शन अब जीवनशैली छनोटहरूको परिणाम हो भनेर बुझिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यो वर्षहरूको संख्या होइन जसले बिग्रन्छ, तर तपाईंले तिनीहरूलाई कसरी खर्च गर्ने छनौट गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईं आफूले खाने कुराहरू परिवर्तन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं कसरी पूरक हुनुहुन्छ, र तपाईं कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले हाम्रो स्वस्थ मध्य वर्षहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कमजोर वृद्ध वर्षहरूलाई स्थगित गर्न वा रोक्न सक्नुहुन्छ। जति चाँडो तपाईं आफ्नो आहार उमेर प्रमाण गर्न सुरु गर्नुहोस्, राम्रो। यद्यपि, यो कहिल्यै ढिलो हुँदैन। यदि तपाइँ यी सरल दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहुन्छ भने योजना सरल छ।
1. तपाईंको हालको फलफूल र तरकारीको खपत बढाउनुहोस्
2. वास्तविक खानाले तपाईंलाई दुबला रहन मद्दत गर्नेछ
3. राम्रो बोसो बनाम खराब बोसो
4. सही पूरक लिनुहोस्
तपाईले यो आवश्यक आहार बानीलाई ढिलो गर्न, रोक्न वा बुढ्यौली प्रक्रियालाई उल्टाउन पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। अक्सिडेन्ट वा फ्री रेडिकल भनेर चिनिने अक्सिजन टुक्राहरू सबै उमेर-सम्बन्धित रोगहरूको प्रमुख अन्तर्निहित कारण हुन्, हृदय रोग र स्मरणशक्ति हानिदेखि लिएर क्यान्सर र मोतीबिन्दुसम्म। यदि अनचेक छाडियो भने, यी अक्सिडेन्टहरूले कोशिका र तन्तुहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ, हामी उमेरसँगै बिग्रन्छ। सौभाग्य देखि, शरीरमा एक कट्टरपन्थी प्रणाली छ जसलाई एन्टिअक्सिडेन्ट भनिन्छ जसले यी हानिकारक अक्सिडेन्टहरूलाई निष्क्रिय र हटाउँछ।
रंगीन फलफूल र तरकारीहरूमा 12,000 भन्दा बढी एन्टिअक्सिडेन्ट यौगिकहरू पहिचान गरिएको छ। यी मध्ये धेरै यौगिकहरूले सूजन पनि कम गर्दछ, जुन हृदय रोगदेखि अल्जाइमर सम्मका धेरै रोगहरूको जडमा छ। प्राकृतिक उत्पादनहरूको सेवन बढाउँदा सबै उमेर-सम्बन्धित रोगहरूको लागि तपाईंको जोखिम कम हुन्छ। यसले डेकलाई स्वस्थ मध्य वर्षहरू तपाईंको 80 वा त्यसभन्दा पछाडि विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ, तर अनुसन्धानले देखाउँछ कि तपाईं जवान देखिन र जवान महसुस गर्नुहुनेछ र तपाईंको कम्मरलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो समय हुनेछ।
अतिरिक्त तौलबाट छुटकारा पाउनु ठीक छ, धुम्रपान छोड्नु भनेको तपाईंको स्वस्थ वयस्क वर्षहरू तपाईंको 70 र 80 को दशकमा विस्तार गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो। अधिक तौल हुनु धेरै रोगहरूको लागि जोखिम कारक हो, वृद्ध वयस्कहरूमा असंयम सहित, विशेष गरी पुरुषहरूले पुरुषहरूको लागि वयस्क डायपरको बिक्रीमा हालैको स्पाइक देख्दै। अहिले मोटोपनासँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रत्येक व्यक्तिमध्ये आठ जनाभन्दा बढीको साथमा, तौल घटाउनुले तपाईंको जीवनमा वर्षहरू र तपाईंको जीवनमा वर्षहरू थप्नेछ।
यदि तपाइँ आदर्श शरीरको तौल प्राप्त गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, अधिक तौल भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वर्तमान शरीरको वजनको 10% गुमाएमा धेरै उमेर-सम्बन्धित रोगहरूको जोखिम कम गर्नेछन् र उनीहरूको स्वस्थ वर्षहरू विस्तार गर्नेछन्। तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि तौल घटाउन त्यति गाह्रो छैन यदि तपाईं सीधा नियममा अडिग रहनुभयो भने: छिटो र प्रशोधित खानाहरूको आफ्नो सेवन सीमित गर्नुहोस् र सम्पूर्ण खानाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। प्रशोधित खानेकुराले पाउन्ड मात्र थप्दैन तर बुढ्यौली प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउँछ। जब तपाईंको आहार खानाहरू प्राकृतिक हुन्छन्, तपाईंले स्वचालित रूपमा क्यालोरीहरू घटाउनुहुन्छ।
ट्रान्स फ्याट र स्याचुरेटेड फ्याट जस्ता केही बोसोले उमेर बढ्छ र हृदय रोग, स्मरणशक्ति हानि, क्यान्सर र अन्य रोगहरूको जोखिम बढाउँछ। रातो मासु, फ्याटी डेयरी उत्पादनहरू, र हाइड्रोजनयुक्त वनस्पति तेलले बनेको कुनै पनि चीजहरू जस्तै वृद्धावस्थाको लागि प्रो-एजिंग फूडहरू बेवास्ता गर्नुपर्छ। संतृप्त र ट्रान्स फ्याट घटाउने अर्को फाइदा यो हो कि यसले तपाईंको प्रेम जीवनलाई सुधार्न सक्छ। धेरै बोसोयुक्त खाना खाएपछि पुरुषको रगतमा टेस्टोस्टेरोनको मात्रा ५० प्रतिशतले घट्छ। यसबाहेक, उच्च बोसोयुक्त आहारले धमनीहरू बन्द गर्छ, नपुंसकताको एक सामान्य कारण।
उमेर बढ्दै जाँदा, तपाईंलाई थप भिटामिन चाहिन्छ। उदाहरणका लागि, भिटामिन डी लिनुहोस्। जब हाम्रो छाला सूर्यको किरणको सम्पर्कमा आउँछ, हाम्रो शरीरले भिटामिन डी उत्पादन गर्छ, तर यो क्षमता उमेर बढ्दै जान्छ। बीस वर्षका मानिसहरूले तेस्रो कक्षामा हुँदा उनीहरूको शरीरले उत्पादन गरेको भिटामिन डीको ८०% मात्र उत्पादन गर्छ। जब एक व्यक्ति आफ्नो 80s पुग्छ, त्यो उत्पादन मात्र 70% मा झरेको छ। फलस्वरूप, जीवनभर बलियो हड्डीहरू कायम राख्न आहार स्रोतहरू बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
त्यसोभए, जब 200IU तपाईको बीसको दशकमा पर्याप्त थियो, तपाईले चालीस र पचासको दशकमा 1000IU सम्म आवश्यक पर्दछ। B12, क्याल्सियम, र अन्य पोषक तत्वहरूको लागि समान हो। मानिसहरूले यी स्तरहरूको पोषक तत्वहरू केवल आहार मार्फत प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्नु अवास्तविक छ, त्यसैले मौकाहरू नलिनुहोस् र मध्यम-खुराक बहु भिटामिन र खनिज पूरकको साथ खाली ठाउँहरू भर्नुहोस्।
तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न: तपाईंले व्यायाम गर्नुपर्छ। बोसो जलाउन र आफ्नो हृदय र दिमागलाई राम्रो आकारमा राख्न, तपाईंलाई दैनिक एरोबिक व्यायाम (जस्तै छिटो हिड्ने, पौडी खेल्ने, बाइकिङ वा दौडने) र कम्तीमा दुई पटक-साप्ताहिक बलियो बनाउने गतिविधिहरू (तौल उठाउने) आवश्यक छ, चाहे त्यो दूध मात्रै उठाउनु होस्। भान्सामा जगहरू। सुसमाचार यो हो कि तपाईं एक पूर्ण प्याकेज हुनुहुन्छ। तपाईंको मुटुलाई जोगाउन आहार सिफारिसहरूले मस्तिष्क स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ र तपाईंलाई चम्किलो रंग कायम राख्न मद्दत गर्दछ। बुद्धिमानीपूर्वक उपभोग गर्नुहोस्।
दीर्घायु तपाईंको नियन्त्रणभन्दा बाहिर देखा पर्न सक्छ, तर धेरै स्वस्थ बानीहरूले लामो जीवनको नेतृत्व गर्न सक्छ। कफी वा चिया पिउनु, व्यायाम गर्नु, पर्याप्त सुत्नु, र रक्सीको खपत सीमित गर्नु सबै उदाहरण हुन्। यी बानीहरू, संयुक्त हुँदा, तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्न र लामो जीवनको बाटोमा सेट गर्न सक्छ।
संसारमा शीर्ष 20 सबैभन्दा ठूलो रक्षा ठेकेदारहरू 2022